Kacha mma Chromebooks maka Kidsmụaka: Akwụkwọ eji ede ihe maka ụmụaka gị ga-ahụ n'anya
Ma nwata akwụkwọ Chrome kacha mma ma ọ bụ na ọ bụghị nke ziri ezi maka ndị na-eto eto, ndị na-eto eto n'ezinụlọ gị, laptọọpụ kacha mma nke ụmụaka , gị na ụmụ gị kpebiri. Otu ọ dị, ihe ndị dị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-emechi nhọrọ gị na otu ngwaọrụ na-abụkarị otu. Chromebooks bụ laptọọpụ , ka emechara; ha na - agba ọsọ na - iche, albeit lighter, sistemụ arụmọrụ, ChromeOS.
Dị ka ịhọrọ laptọọpụ kacha mma maka obere-m, ihe ndị kachasị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ kacha mma Chromebooks maka ụmụaka bụ ọnụahịa, ike, ntụkwasị obi na ogologo oge. Ya mere, edozila maka ọnụ ala ị nwere ike ịchọta. Kama, mee nyocha gị ma họrọ nke kachasị ọnụ ala ị nwere ike ịchọta, yanaiwu siri ike, ike zuru ezu iji hụ ụmụaka site na ọrụ ụlọ akwụkwọ ha, na ndụ batrị iji dịrị otu ụbọchị ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụrụ na ọ gaghị aba.
Ọ bụrụ na nke ahụ dị gị ka ọtụtụ usoro - ma ọ bụ maka na ị maghị ọtụtụ ihe banyere laptọọpụ ma ọ bụ n'ihi na ị na-arụsi ọrụ ike dị ka nne na nna iji jupụta ndepụta nke ọrụ - echegbula . Nwere ike ịdabere na anyị ịkekọrịta ọrụ IT anyị, nke ahụ bụ ihe anyị nọ ebe a. Maka nlele ị na-ele, lee Chromebooks kachasị mma maka ụmụaka n'afọ 2021. Ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ nke ziri ezi maka nwa gị ma kụrụ zụta.
Ndị a bụ Chromebook kachasị mma maka ụmụ akwụkwọ maka afọ agụmakwụkwọ na-esote
Nke a bụ bes t Chromebooks for 2021
Ekwesịrị m ịzụta Chromebook? Ka anyị nwere gịenyere aka ikpebi.
(Ebe E Si Nweta Foto: Ọdịnihu)
Best Chromebook niile maka Kidsmụaka
CPU: ruo AMD A4-9120C Ihe eserese: ruo AMD Radeon R4 RAM: 4 GB LPDDR4X Ihuenyo: 11.6 inch 16: 9 IPS HD (1366 x 768) touchscreen Nchekwa: 32 GB - 64 GB nchekwa nchekwa nchekwa ndụ batrị: ruo elekere 15
Ihe kpatara ịzụta
+ Ezigbo mmetụ ihu na ntụgharị mmiri + Nnukwu ihe owuwu na owuwu
Ihe kpatara iji zere
- Mkpebi ihuenyo dị ala
Enweghị ọtụtụ Chromebooks nọ ebe ahụ nwere ike ịkarị ọnụahịa / arụmọrụ arụmọrụ nke Acer's Chromebook Spin 311, hapụ naanị tinye ụyọkọ atụmatụ pụtara ìhè na ngwakọta. Ọ bụghị naanị otu n'ime ihe kacha mma Chromebooks ebe ahụ; ọ bụkwa otu n'ime uru kachasị mma maka ego, na-enye onyinye nke na-achọ 2-in-1, atụmatụ njirimara kacha mma, kamera 720p HDR, yana ọdụ USB-C maka ọnụahịa ntinye. Nzube a dịkwa mma, dị ka keyboard ya na touchpad, nke na-eju anya na-enye afọ ojuju iji yana karịa karịa ị ga-ahụkarị na ụdị laptọọpụ .
Ndị nne na nna ga-enwe ekele maka nchedo malware nke ChromeOS wuru na batrị oge batrị nke Chromebook a, ebe ụmụaka ga-enwe ekele maka ịdị arọ ya dị kilogram 2.31, n'ihi na onweghị nwa amụrụ. N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na Acer anaghị akọrọ nyocha ọ bụla, nke a bụ ngwongwo jupụtara na onye ọ bụla ga-enwe ekele maka ya.
Nkọwa CPU: Intel Core m3 - i7 RAM: 8 GB - 16 GB Ngosipụta: ruo 4K Ultra HD Ngosiputa Molekụla Nchekwa: 64 GB - 256 GB Ndụ batrị: ruo awa 12
Ihe kpatara ịzụta + Oge ndụ batrị dị ịtụnanya + keyboardtụnanya keyboard 'Hush'
Ihe kpatara iji zere - No biometric login
Otu n'ime Chromebooks kachasị mma dịkwa kwa n'elu ahịrị. Google Pixelbook Go nwere ike ịbụ onyinye kachasị ọnụ ahịa Google, mana rue Chromebooks na-aga ụmụ akwụkwọ kọleji, ọ ka na-efu nnukwu ego. O nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma maka nwata. Studentsmụ akwụkwọ kọleji na ụmụ akwụkwọ sekọndrị ga-ahụ usoro a mara mma nke ha nwere ike igosi handị enyi na ndị ọgbọ ha.
Agbanyeghị, ọ bụghị naanị otu ọ dị mma. Maka onyinye dị elu, ụfọdụ atụmatụ adịchaghị na-efu ebe a: njikọ njikọta biometric, ikekwe. N'agbanyeghị nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ ihe ga-amasị ebe a.
'you na-enwetakwa ahụmịhe Chromebook, ọmarịcha arụmọrụ ya bụ naanị site na nnukwu ihe kiiboodu nke na-enye ọrụ dị jụụ na nzaghachi na-eju afọ. Ebe ndị ntorobịa na ndị ntorobịa enweghị ike inyere aka ma ha na ndị enyi ha na-emekọrịta ihe, ha ga-ahụ 1080p a webcam
- atụmatụ nke ị na-agaghị ahụkarị n'ọtụtụ komputa.
Na-agụ nyocha zuru ezu: Google Pixelbook Go
Bestmụaka kacha mma ’Chromebook na Keyboard Detachable
a> Nkọwapụta CPU: MediaTek Helio P60T Ihe eserese: ARM G72 MP3 800 GHz agbakọtara RAM: 4 GB LPDDR4X Ihuenyo: 10.1 anụ ọhịa IPS FHD (1920 x 1200) ihuenyo mmetụ Nchekwa: 64 Go eMMC Ndụ batrị:
ruo elekere 10
Ihe kpatara ịzụta + Dị fechaa na obere obere +
Ihe kpatara iji zere -
Obere keyboard na picky touchpad
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook nwere ọtụtụ elele maka ụmụaka. Ọ bụ obere na incredibly ìhè, na-eme ya ihe ezigbo mgbakwunye na arọ backpacks jupụtara akwụkwọ. Ọ nwere a mbughari keyboard ka ha nwee ike seamlessly ịgbanwee na mbadamba mode mgbe ha rụọ n'ụlọ omume na-eme. Ma, o nwere ndụ batrị na-agba agba, na-enye onye na-ewe 21 awa n'ule anyị. Ebe ọ bụ na ọtụtụ kọmputaLaptọọpụ na Chromebooks dị ihe dịka awa 12, nke ahụ amaka. Nke kachasị mma, ọ dị ọnụ ala, nke pụtara na ị ga-enweta ụdị ahụ niile maka ihe na-enweghị isi. Emeela nkwekọrịta na ebe a, n'ezie. Ya trackpad na keyboard nwere ike ka mma. Agbanyeghị, ị na enwetala ọtụtụ maka obere - ma ọ bụ opekata mpe ụmụ gị. Nke a bụ tumadi n'ihi na ha nwere ngwaọrụ abụọ na otu. N'ezie, anyị ga-agarịrị na nke a bụ otu n'ime ụkpụrụ kacha mma 2-in-1 laptops
. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook
Best Chromebook maka ụmụaka na Pen Nkwado
Nkọwa CPU: ruo Intel 10th Gen Core i5 Ihe eserese: ruo Intel UHD Graphics RAM: 4 GB - 8 GB Ihuenyo: IPS multitouch dakọtara ruo 14 sentimita asatọ FHD (1920 x 1080) Nchekwa: 32 GB - 128 GB eMMC Ndụ batrị: ruo elekere 8
Ihe kpatara ịzụta + Mgbapụta adịghị mma + Ezigbo nkwado stylus
Ihe kpatara iji zere - obere ihe internals
The HP x360 Chromebook na-efu ihe karịrị $ 700 na ọtụtụ, mana nke ahụ bụ naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ ndị ahụ, n'ime. Ọ bụ ezie na ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ike irite uru site na ntọala dị elu dị otu a, ọ ga-abụ na ha karịrị ihe ụmụaka chọrọ. Mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere HP Chromebook a dị ukwuu: Ọ na-abịa n'ọtụtụ nhazi nke na-anya isi ike dị iche iche na nha ihu atọ dị iche iche. Nke a pụtara na enwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ. N'agbanyeghị ogo nwa gị dị, e nwere ihe dị n'usoro ọmụmụ a.onye i chere na o ruru eru.
Banyere ihe egwuregwu ahụ, ọ nwere nnukwu ihuenyo na mmetụ aka na nkwado stylus ... ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye nwatakịrị okike gị ntakịrị, ya bụ. Enwere ike ịgụnye mkpịsị ahụ na ọnụahịa nke Chromebook, mana ọ bụ nnukwu mgbakwunye ma ọ bụrụ na onye otu ezinaụlọ na-abanye na nka ma ọ bụ imewe (ma ọ bụ na ọ bụ naanị chọrọ ịdị jụụ ma detuo ihe na klaasị n'emefughị ​​akwụkwọ).
(Ebe E Si Nweta Foto: Asus)
Kachasị Mkpa Rọgụrụ agịga Chromebook maka
Nkọwa CPU: Intel Celeron N4000 - N4020 Ihe eserese: Intel UHD Graphics 600 RAM: 4 GB LPDDR4 Ihuenyo: LCD 11 touchscreen, 6 inch (1366 x 768) Nchekwa: 32G eMMC Ndụ batrị:
ruo elekere 12 Ebumnuche ịzụta + USB-C ọdụ ụgbọ
Rugidere na splash na-eguzogide ọgwụ Ihe kpatara iji zere
- Stylus not added Ndị na-eto eto ndị debanyere aha nwere ike ibute isi na ọrụ klaasị mgbe ha na-eji Chromebook ha, mana nke ahụ apụtaghị na ihe ọghọm agaghị eme. Drips, Spills, and Bumps are
Lamụaka Laptọọpụ kacha njọ Nightmare
, ma ọ bụrụ na ị na-emeso otu onye nwere nsogbu ma ọ bụ nwatakịrị nwere ike ịdaba, Chromebook Flip Asus C214 bụ otu kachasị Chromebooks maka ụmụaka. A wuru ikpe a iji guzogide mmetụta, yana ihe mgbochi roba niile, chassis na-eguzogide ọkọlọtọ, keyboard na-eguzogide ọgwụ, na mgbatị nke ga-abụ nke kachasị nke k. Ogwe ọdụ USB-C abụọ, nkwado stylus na mmetụ ihu, nhazi 2-in-1 na ndụ batrị dị ogologo bụ naanị ichikota na achicha ahụ, ọ bụ ezie na ha na-ewu ewu mgbe niile. Chọrọ ọzọ? O nwedịrị ese foto abụọ - n’elu ihuenyo ahụ na otu n’okpuru keyboard nke ekwesịrị ihu ụwa mgbe ịnọ na mbadamba ụrọ. Nke ahụ bụ akụkụ atụmatụ nke laptọọpụ
n'okpuru $ 500 .
Ezigbo ihe: Xiaomi na-eme ihe ruru 150 euro ịhọrọ nhọrọ HD na televishọn 4K
2021-05-09 01:59:50 | Akụkọ
Na-eme atụmatụ ịzụta telivishọn? Nwere ike ịnweta ụdị Xiaomi na mbelata n'oge ọrụ nkwalite a nke na-adịgide ruo mgbe June 20. Ọ metụtara ụdị ndị a: Mi TV 4A 32 "(32 sentimita asatọ, HD 720p, Wi-Fi) ga-adị maka € 199 kama € 249, ma ọ bụ € 50 kwụsịrị. Mi TV 4S 43" (43 sentimita asatọ, 4K UHD, Wi-Fi) g...
Otu China si ledo Uyghurs anya site na asọmpi hacking
2021-05-09 01:57:36 | Akụkọ
Nledo China na Uighurs na iPhones amabuelarị, mana MIT Review na-eleghachi anya na ọnọdụ nke izu ohi a, na usoro ndị steeti China ji eme ihe. gaa n'akụkụ ndị ọzọ nke Beijing. Ndị ọchịchị China kwenyere na ọhụụ a hụrụ n'oge asọmpi mba ndị a...
Barbara Pompili machibidoro ihe ụmụaka ji egwuri egwu iji ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-emerụ ahụ
2021-05-09 01:56:36 | Akụkọ
Kpọọ gị n'ụtụtụ a na Franceinfo, Barbara Pompili, Mịnịsta na-ahụ maka mgbanwe gburugburu ebe obibi, mere ka a mara ọkwa maka ọgụ a na-alụso mmetụta ọjọọ nke ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ. Site na 2022, a ga-ewepụ ihe eji egwuri egwu ụmụaka nke gosipụtara ọkụ na-acha anụnụ anụnụ dị egwu na ire ere. fra...
Ezigbo atụmatụ: ezigbo Ultimate Ears Wonderboom 2 nke na-ebugharị okwu na-erughị euro 30 na SFR
2021-05-09 01:04:00 | Akụkọ
You bụ onye ahịa SFR *? Nwere ike ịnweta Ultimate Ears Wonderboom 2 obere mkparịta ụka Bluetooth maka ọnụahịa ikpeazụ nke $ 29.99 kama ọnụahịa oge nke $ 99.99. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ: na mbụ ị na-akwụ ụgwọ euro 79,99, mgbe ahụ, SFR kwụghachiri gị ego nke euro 50 na ụgwọ gị. Dị ka ule anyị si kwuo...
Nintendo Gbanye Lite: 2 awade nnọọ jidesie tupu ọgwụgwụ nke izu
2021-05-09 01:03:00 | Akụkọ
Na mgbakwunye na coral, isi awọ, odo na turquoise agba, enwere ugbua acha anụnụ anụnụ nke Nintendo Switch Lite. Na Fraịdee, Mee 7, 2021, a ga-ewepụta ihe njikwa ọhụụ ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta Japan na France mana ọ ga-ekwe omume ịhazi ya na ịntanetị. Ya mere, Amazon na-enye gị ka ịzụrụ acha anụ...
IPad Pro: nyefee iwu Apple mmetụ ọhụrụ tupu ngwaahịa apụ!
2021-05-08 17:21:21 | Akụkọ
Nzukọ Apple mbụ nke afọ 2021 bụ izu ole na ole gara aga na akara Apple gosipụtara iPad Pro ọhụrụ ya na M1 mgbawa. Ekwuputara maka ntọhapụ ndokwa maka May 31, a ga-ebu ụzọ nye iwu mpempe akwụkwọ Cupertino dị na nke 11-inch na ọnụahịa nke euro 899.99 na Fnac. Ejiri akara French na-edozi ọtụtụ arịrịọ. ...
RED nke SFR fiber internet box na-erite uru site na onyinye pụrụ iche (na oke)
2021-05-08 16:53:47 | Akụkọ
Inwe ọsọ Internetntanetị kachasị mma n'ụlọ, eriri dị mkpa, mana onyinye fiber abụghị ihe kachasị ọnụ ala. Site na ezigbo RED site na atụmatụ SFR, nke a bụ obere enyemaka iji mee ka ị gbagoo nnukwu ọsọ. Onye ọrụ ahụ na-enye igbe eriri ya na euro 25 kwa ọnwa kama euro 35 mbụ. Ihe a na-enye gụnyere nhọ...
Fnac: A na-ere laptọọpụ Huawei Matebook D14 maka euro 150
2021-05-08 13:57:30 | Akụkọ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọzọ na Apple MacBook a ma ama, ị nwere ike ilebanye anya na Matebook D14. Ka ọ dị ugbu a, Huawei laptop laptop PC dị na ọnụego belata na saịtị Fnac. E rere ya na euro 849,99, ngwaọrụ dị na agba ntụ na-ahụ ka ọnụahịa ya wedata na euro 699,99; nke na-eme nbudata ozugbo nke euro...
Xbox Series S: enyelarịrị ijide izu ụka a
2021-05-08 13:56:26 | Akụkọ
Microsoft na nso nso a ka ohuru ohuru nke Xbox consoles nwere udiri ihe abuo. The Xbox Series S bụ ihe dị ọnụ ala karịa na ha abụọ ma nwekwaa ike. Microsoft na-eche echiche nke ndị na-egwu egwuregwu nke nwere igwe televishọn 4K chọrọ ezigbo arụmọrụ HD kacha mma yana usoro X ya dị oke egwu, yana ndị ...
Ezigbo ihe: kwụọ ụgwọ na-erughị euro 900 maka kọmputa laptọọpụ Lenovo a kwadebere nke ọma maka ndị na-egwu egwuregwu
2021-05-08 13:55:19 | Akụkọ
Na-achọ laptọọpụ 15 nke anụ ọhịa nwere ezigbo ọnụahịa / arụmọrụ ga-egwu? Gaa na Lenovo Ideapad 3 15ARH05. Ihe nlere a na-efu 899.99 euro karịa 1099 euro ma nwee ngosipụta nke 15.6-inch Full HD 120Hz, ihe ngosi AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz, ihe ngosi Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4 GB, 16 GB Ram na 512 GB S...
Google nnyemaaka nwere ike ịgbasa ozi olu gị na smartphones
2021-05-08 13:54:24 | Akụkọ
Ọ ga-ekwe omume, n'ihi ọrụ Mgbasa ozi (na French) iji Google Assistant iji kwusaa ozi nke ọma na ọkà okwu ejikọtara dị ka Google Home ma ọ bụ Nest. Nwere ike ịkpọ ụmụ gị na tebụl site na kichin, ma hụ na ha natara ozi ahụ n'ime ụlọ ha. Google ugbu a na-emeziwanye ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na Google Assistan...
IPhone 12, iPhone 11: gini bụ nnukwu azụmahịa na Apple smartphones?
2021-05-08 13:28:37 | Akụkọ
A na-ekwukarị na ngwaahịa Apple, ọkachasị iPhones, dị oke ọnụ. Ma ọ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịbụ ikpe na ụdị dị elu nke iPhone nke nwere ike ịgafe euro 1000 na nhọrọ dị elu. Agbanyeghị, nke a abụghị ikpe na oke niile. Ya mere, enwere onyinye ndị na-atọ ụtọ na iPhone 12 na iPhone 12 dị nso. IPhone S...
Apple VS Epic Games, Facebook na iOS 14.5, mgbawa izizi na 2nm ... nchịkọta nke akụkọ teknụzụ nke izu
2021-05-08 12:54:12 | Akụkọ
Iji kwuo nke kachasị, ọ bụ izu na-arụsi ọrụ ike maka ndị ọka iwu maka Apple na Epic Games, yana mmalite nke nnwale a na-atụ anya na obere teknụzụ ụwa. Mana gafee akụkọ a karịrị akarị, ka anyị tụlee isi okwu ndị ọzọ emerela ederede na ụbọchị ndị a. Nkọwapụta nke ị nwekwara ike ịlele na vidiyo na pọdk...
VPN: Kedu uru nke ngwa ọrụ SecureLine gụnyere na Avast Ultimate?
2021-05-07 14:58:16 | Akụkọ
Iji kpuchido maka iyi egwu weebụ, antivirus abụrụla ihe dị mkpa. Ma ụdị sọftụwia ọzọ dị n'ụzọ iji sonyere ya n'etiti azịza anyị enweghị ike ime ọzọ na-enweghị: VPN. Na mbu edebere maka azụmahịa ụwa, VPN eguzobewo n'etiti ndị ọha na eze na-ekele ọrụ ndị jikọtara nkwanye ùgwù zuru oke maka nzuzo na am...
Samsung Galaxy A na - ahụ ọnụahịa ya wedara na erughị euro 130, echekwala ọzọ!
2021-05-07 14:57:02 | Akụkọ
Ahịa mbadamba nkume na-abịa n'ọtụtụ edemede taa, n'etiti obere mbadamba na ụdị ngwakọ nke gbanwere n'ime laptọọpụ. Iji sọfụ ngwa ngwa, kpọọ egwuregwu dị mfe ma ọ bụ usoro nlele na vidiyo ndị ọzọ, ọkachasị maka ụmụaka, a na-enwe mbadamba mbadamba 8 dị mfe mgbe niile na azụmahịa a na Samsung Galaxy Ta...